लता मंगेशकरका १० रोचक किस्सा, खानामा मन्द विषदेखि हवाई यात्राको त्राससम्म - Glamorous Icon
Home›Profiles›Artists›लता मंगेशकरका १० रोचक किस्सा, खानामा मन्द विषदेखि हवाई यात्राको त्राससम्म
हाम्रै एउटा पुस्ता, जो लता मंगेशकरकी स्वरमा लट्ठीएर हुर्किए । उनै स्वर कोकिलाले आज आफ्नो ८८ औं जन्मोत्सव मनाउँदैछिन् ।
अनौठो लाग्न सक्छ, लताले अहिलेसम्म करिब ३० हजार गीतमा आफ्नो आवाज दिइसकेकी छिन् । जबकी उनको करियर १३ बर्षको उमेरदेखि सुरु भयो । मराठी फिल्म ‘पहली मंगलागौर’का लागि उनले पहिलो गीत गाइन् । यो सन् १९४२ को कुरा ।
भारत, मध्यप्रदेशको इन्दौरमा जन्मिएकी हुन् लता, जसको पिता पंडित दीननाथ आफै रंगमञ्चका कलाकार र गायक थिए । संभवत उनले सांगीतिक पृष्टभूमिमा हुर्कने अनुकुलता पाइन् ।
बलिउडमा उनको प्रवेश फिल्म ‘आपकी सेवा’बाट सुरु भयो ।
गीत गाउनकै लागि जन्मिएकी, उनी । बलिउडमा कैयौं गीत गाइन् । कैयौं पुरस्कार र सम्मान पाइन् । उनको जन्मदिनको अवसरमा केहि रोचक किस्साहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१९६१ मा जब लता ३२ बर्षकी थिइन्, तब उनलाई स्लो प्वोइजन दिइयो । यो कुराको खुलासा लताको एकदमै नजिककी साथी सचदेवले आफ्नो पुस्तक ‘ऐसा कहाँ से लाऊं’मा गरेका हुन् । त्यसपछि लेखक मजरुह सुल्तानपुरी केहि दिनसम्म उनको घरमा आएर पहिला आफै खाना चाख्ने र त्यसपछि मात्र लतालाई दिने गर्थे । तर, उनलाई स्लो प्वोइजन कसले दिएको थियो, किन मार्ने प्रयास गरिएको थियो ? अहिलेसम्म कुनै खुलासा भएको छैन ।
किस्सा नम्बर- २
लताको पिता दीननाथ मंगेशकर मराठी थिएटरका चर्चित नाम थिए । गोवामा आप र काजुको बगानका साथै उनले २ लाख रुपैयाँमा एक पहाड पनि खरिद गरेका थिए । उनको इच्छा त के थियो भने, पोर्चुगलीबाट पुरै गोवा खरिद गर्ने । तर, समयले कोल्टे फेर्न नपाई दीननाथ रक्सीको लतमा फसे । यहि कारण उनीहरु आर्थिक रुपमा निथि्रदै गए । अन्ततः लताले सानै उमेरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
धेरैको फेवरेट गायिका हुन्, लता । लाता स्वंमलाई भने कसको आवाजले मन जितेको होला ? जबाफ अनपेक्षित छ । उनको फेवरेट गायक कुनै भारितय होइनन्, मिश्रका गायक उम्म कुलसुम हुन् ।
मधुबाला मान्थिन्, लताको आवाज आफुमा खुब फिट हुन्छ । त्यसैले उनी आफुले अभिनय गर्ने हरेक फिल्ममा साइन गर्नुअघि सर्त राख्थिन् कि, आफ्नो लागि लताले नै प्लेब्याक गर्नुपर्छ । यद्यपी लता चाहि उनको आवाज सायरा बानोमा फिट हुने ठान्छिन् ।
लताले करिब १० फिल्ममा अभिनय समेत गरेकी छिन् । त्यसमा बडी मा, जीवन यात्रा, मन्दिर जस्ता फिल्म सामेल छन् ।
लताले फिल्ममा आनंदघन नामबाट संगीत समेत दिएकी छिन् ।
लताले बाल्यकालमा पढ्न पाइनन् । यद्यपी विश्वको ६ ठूला विश्वविद्यालयले उनलाई बिद्यावारिधीको सम्मान दिएका छन् ।
लतालाई हवाई यात्रामा निकै डर लाग्छ । जब फ्रान्स सरकारले उनलाई ‘प्रेस्टिजियस अवार्ड’बाट सम्मान गर्‍यो, तब लताले मुम्बईमा आएको यो अवार्ड दिनुको कारण खुलासा गरेकी थिइन् ।
बेलायतको लर्ड स्टेडियममा लताका लागि एक स्थायी ग्यालरी रिजटर्ड छ, जहाँ उनी आफ्नो फेवरेट गेम क्रिकेट हेर्न सक्छिन् ।
आफ्नो आवाजलाई मीठो र सुरिलो बनाउनका लागि लताले दैनिक खुर्सानी सेवन गर्छिन् । त्यसमा पनि तिख्खर पीरो कोल्हापुरी खुर्सानी ।